Cinezela iividiyo zakho kwi-H265, ifomathi entsha eyamkelwe yiApple, eneSuper265 | Ndisuka mac
Cinezela iividiyo zakho kwi-H265, ifomathi entsha eyamkelwe yiApple, eneSuper265
Kunye neMacOS ePhakamileyo yeSierra sifumene umgangatho wevidiyo omtsha, owaziwayo uH265. Kukuzivelela kwe-H264, ethembisa ukugcina umgangatho ofanayo kwindawo encinci. Ukuba sifuna ukuba neekhompyuter ezincinci ngakumbi nangakumbi kwaye zilula, abanakuba neenkumbulo eziphezulu. Ukunciphisa indawo kwiinkumbulo zethu nge-APFS kwaye kule meko nge-H265 ngumbono ogqwesileyo. Kodwa iividiyo zangoku zikwiifomathi ngaphandle kwe-H265 kwaye ukuba sifuna ukusebenzisa elona thuba lethu, kufuneka siziguqule. Isicelo esiza kusibona namhlanje, ISuper265 iguqula nayiphi na ifomathi ibe yikhowudi ye-HEVC / H265.
Abafana baseMetakine banesicelo esifumanekayo kwiVenkile yeApple yeMac. Isithembiso sokuqala esisifumanayo kukuthobela u-2 kunye no-3, oko kukuthi, ukunciphisa ubukhulu bevidiyo ngamaxesha ama-2 okanye ama-3. Iifayile ze-2Gb ziya kuhlala kwi-0,7 Gb Cinga ngeemovie ezongezelelweyo esinokuzigcina kwi-iPhone okanye kwi-iPad.
Konke kuqala ngaphakathi kwenkqubo. Sine-App esulungekileyo, ekwaziyo ukuguqula ividiyo ngaphandle kokuphulukana nayo nayiphi na imigangatho. Elinye icala elisezantsi lokuguqula kukuba iiMacs zamva nje nezona zinamandla zithatha phantse kabini ukuba ziguqulele kwi-H265 xa kuthelekiswa nomgangatho wakudala. Ubuncinci siyayazi loo nto I-super365 isebenzisa onke amandla eMac yethu ngomsebenzi wakho wesikolo.
Ujongano lulula kakhulu, oluxatyiswayo ngabasebenzisi abanolwazi oluncinci. Ukuyisebenzisa kulula njengokutsala kunye nokuwisa. Kanye kwisicelo, cofa nje ukuguqula. Kwaye ungakhathazeki ngalo lonke ulwazi olukwividiyo yoqobo: zombini izihlokwana kunye neelwimi ezahlukileyo ziguqulwe ngokugqibeleleyo kwifomathi entsha.
ISuper365 ikwindawo ye Ivenkile yeeMac ngexabiso le- € 4,49. Lutyalomali oluncinci oluya kuphucula amandla ezixhobo zakho zonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Cinezela iividiyo zakho kwi-H265, ifomathi entsha eyamkelwe yiApple, eneSuper265
Uhlaziyo lweRevolver sitsho
Ndikhetha i-HandBrake okanye iMedia Coder, kwaye simahla 🙂
Phendula kwiRevolver Revolution
Kwaye isiguquli se-h265 pro, silunge ngakumbi kunale kwaye sinokukhetha okuninzi. La manqaku abonakala ngathi ayintengiso, ngokungathi iwebhu ibingenalo ulwazi olwaneleyo.
IPodcast 9 × 06: Masithethe ngee-headphone kunye neBluetooth
UMicrosoft uyeke ukunika inkxaso kwiOfisi ka-2011 yeMac